Juventus oo ku dhow inay heshiisyo cusub ka saxiixato labo ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
(Turino) 18 Oct 2019. Sida ay qortay saxaafada Talyaaniga ah, kooxda Juventus ayaa waxay ku dhowdahay inay heshiisyo cusub ka saxiixato xiddigaheeda Juan Cuadrado iyo Blaise Matuidi.
Juventus ayaa durbaba isku diyaarineysa suuqa kala iibsiga ee soo socda waxayna qorsheyneysaa in heshiisyo cusub ay ka saxiixato qaar ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan, sida laga soo xiganayo shabakada CalcioMercato.
Marka hore, Bianconeri ayaa waxay raadineysaa inay soo gabagabeyso wadaxaajoodyada si ay u cusbooneysiiso qandaraasyada qaar ka mid ah xiddigaheeda uu heshiiskooda dhacayo xilli ciyaareedka soo socda, sida Juan Cuadrado iyo Blaise Matuidi.
Sida ay wararku sheegayaan Juventus ayaa dooneysaa in Blaise Matuidi ay qandaraaskiisa ku kordhiso mudo hal xilli ciyaareed kale oo kaliya.
Laakiin Juan Cuadrado oo muhiim u ah qorshaha kooxda Bianconeri maadaama uu kaga ciyaari karo boosas kala duwan ayaa waxay doonayaan inay ka saxiixdaan heshiis cusub ee sanado kale ah.